Indlela ukusekela iPhone yakho, iPad, iPod Touch ngekusebentisa iTunes
Avamile back up kuyinto umkhuba omuhle. Futhi ungakwazi ukuthatha ibhekhaphu of iPhone yakho, iPad noma iPod touch usebenzisa i ICLOUD noma iTunes kalula. Lapha sizothola akubonise kanjani ukusekela iPhone yakho, iPad and iPod touch ngekusebentisa iTunes.
Okokuqala, kufanele abe iTunes, ungalanda version yakamuva kusukela website Apple(http://www.apple.com/itunes/).
Ngaphambi kokubhekhapha, Okufanele ukwazi ukuthi ICLOUD and iTunes angaba isipele idatha iningi on iPhone yakho, iPad, noma iPod Touch. Ulwazi ukusekela ngokulondoloza-up kuhlanganisa umculo uthenge (isipele of music uthenge ayitholakali wonke amazwe), TV (US kuphela), Izinhlelo zokusebenza, namabhuku; futhi ibuye izithombe namavidyo, okuyizinto in the Roll Ikhamera; Izilungiselelo idivayisi (like Hambayo Izintandokazi, Wallpaper, and Mail, othintana, Ikhalenda akhawunti); Idatha lokusebenza; Isikrini sasekhaya kanye lokusebenza inhlangano; imiyalezo (iMessage, SMS, and MMS), Ukuncenceza, nokuningi. Amafayela abezindaba aba ungasekelwa, kepha usengavuselelwa ngu ukuvumelanisa nge iTunes.
Njalo wena uvumelanise idivayisi yakho iOS nge iTunes, uzophiwa isipele automaticlly (abakhubazekile uma ICLOUD isipele kuvuliwe).
Ungakwazi futhi ngesandla yokusekelayo idivayisi yakho iOS ngekusebentisa iTunes. Landela lezi zinyathelo ukuze ngesandla yokusekelayo idivayisi yakho iOS ngekusebentisa iTunes:
Xhuma idivayisi yakho iOS kwikhompyutha nge-version yakamuva ye iTunes ezifakiwe
Chofoza inkinobho idivaysi ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Chofoza “Isipele Manje” inkinobho ngezansi “Ngesandla isipele futhi Buyisela“.
Ungase futhi uchofoze Ifayela menu bese ukhetha Amadivayisi > Isipele.
Inothi: Uma usebenzisa iTunes 10.7 noma ngaphambi kwalokho, Chofoza kwesokudla-nje (noma ngokuchofoza Control-) idivayisi futhi zikhethe Isipele.
Indlela ukwenza isipele idatha iPhone ngaphambi ngcono ku-iOS 7
Posted on September 25, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba EhambayoAmathegi isipele iPad, isipele iPhone, isipele iPod touch
Langaphambilini post Previous: Nendlela Phinda kusulwe Amafayela kusuka iPad
Next post Next: What ICLOUD uyahlehla